यी हुन् यो साता नेपाल ट्रेण्डिङमा परेका सात नेपाली गीत - Himalayan Kangaroo
यी हुन् यो साता नेपाल ट्रेण्डिङमा परेका सात नेपाली गीत
Posted by Himalayan Kangaroo | ८ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०६:४४ |
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल युट्युवको नेपाल ट्रेण्डिङमा यो साता ७ नेपाली गीतले स्थान पाएका छन् । लोक गायक प्रकाश सपुतको म्यूजिकल मुभी बोलमाया ट्रेण्डिङको पहिलो नम्बरमा रहन सफल भएको छ । यी हुन् यो साता नेपाल ट्रेण्डिङमा परेका सात नेपाली गीत ः
बोलमाया / प्रकाश सपुत
प्रकाश सपुतको शब्द,संगीत र निर्देशन रहेको लोकलयमा आधारित गीत बोलमाया युट्युवको नेपाल ट्रेण्डिङको पहिलो स्थानमा रहन सफलभएको छ । नारायण रायमाझी र शान्तिश्री परियारको स्वर रहेको गीतको भिडियोमा अञ्जली अधिकारीले जीवन्त अभिनय गरेकी छिन् । रिलिज भएको तेस्रो दिन अर्थात मंगलवारसम्ममा यस गीतको भिडियोलाई ७ लाख ९ हजारभन्दा बढी भ्यूज प्राप्त भएको छ भने ४ हजार भन्दा बढी कमेन्ट्स प्राप्त भएका छन् । यस्तै १७ हजार बढीले लाइक्स गरेका छन् ।
मनविनाको धन /अशोक दर्जी र टंक बुढाथोकी
गत साता ट्रेण्डिङको पहिलो स्थानमा रहेको अशोक दर्जी र टंक बुढाथोकीको गीत मनविनाको धन भने यो साता ओरालो झरेर ५ नम्बरमा आइपुगेको छ । रिलिज भएको दुई सातामा यस गीतले ५४ लाख बढी भ्यूज पाएको छ । विराज नेपालको शब्द रहेको मनविनाको धनका संगीतकार गायक बूढाथोकी आफैं हुन् ।
सररर मोटर चढेर/ ब्रिजेश श्रेष्ठ र वर्षा कर्मचार्य
यस्तै युट्युव ट्रेण्डिङको होडबाजीमा यो साता १० औं नम्बरमा ब्रिजेश श्रेष्ठ र वर्षा कर्मचार्यको सररर मोटर चढेरको अफिसियल भिडियो रहन सफल भएको छ । गत साता रिलिज भएको यस गीतले सोमवार अपरान्हसम्ममा ७ लाख १० हजार भ्यूज र ९ सय ७५ कमेन्ट्स प्राप्त गरेको छ ।
फास्ट फास्ट/शंकर स्माइल र गायिका सुमी चाम्लिङ
गायक शंकर स्माइल र गायिका सुमी चाम्लिङको स्वर रहेको फास्ट फास्ट बोलको गीतको भिडियो यो साता युट्युव ट्रेण्डिङको १७ औं नम्बरमा रहेको छ । सुनिल क्षेत्रीको कोरियोग्राफी र अभिनय रहेको गीतको भिडियोमा नायिका प्रियंका कार्की फिचरिङ छिन् । डान्सिङ बिटको यस गीतको भिडियोमा नेपाली ठिटोज समूहको आकर्षक नृत्य समावेश छ । लगातार तेस्रो सातासम्म ट्रेण्डिङमा रहेको यस गीतले १० लाख बढी भ्यूज पाएका छन् ।
के तिमी मलाई /फ्युबा तामाङ
गायक फ्युबा तामाङको के तिमी मलाई यसरी नै माया गर्छौ बोलको गीतको भिडियो यो साता नेपाल ट्रेण्डिङको २२ औं नम्बरमा रहेको छ । शब्द र संगीत समेत गायक तामाङको आफ्नै रहेको यस गीतले रिलिज भएको एक सातामा ३ लाख ९५ हजार बढी भ्यूज पाएका छन् ।
आज राति /नविन गहतराज
यो साता नेपाल ट्रेण्डिङको २८ औं नम्बरमा भने एउटा लिरिकल भिडियो परेको छ । गायक नविन गहतराजको शब्द,संगीत र स्वर रहेको आज राति बोलको गीतको लिरिकल भिडियोले ३० औं नम्बर ओगटेको हो । आमाको महिमा गाइएको यस गीतको भिडियोले सोमवारसम्ममा १ लाख ६६ हजार बढी भ्यूज पाएका छन् ।
कुरेर बस्छु/स्वप्न सुमन
गायक स्वप्न सुमनको कुरेर बस्छु बोलको गीत यो साता पनि नेपाल ट्रेण्डिङमा रहन सफल भएको छ । केही सातादेखि लगातार ट्रेण्डिङमा रहँदै आएको यस गीतले यो सोमवारसम्ममा ११ लाख १९ हजार बढी भ्यूज पाएका छन् । गीतमा स्वप्न सुमनकै शब्द र संगीत रहेको छ । यो साता नेपाल ट्रेण्डिङको ४८औं नम्बरमा रहेको यो गीत टप फिप्टीमा परेको अन्तिम नेपाली गीतको रुपमा रहेको छ ।
Previousसाढे ३३ किलो सुन प्रकरणका नाइके गोरे पक्राउ
Nextसुन काण्डका नाइके गोरे कसरी पक्राउ परे ? के हो सुन काण्डको यथार्थ ?
प्रदीप खड्काको चलचित्र रोज हेरेपछि रोजी महर्जनका बुवाले दिए यस्तो प्रतिक्रिया
२३ भाद्र २०७५, शनिबार ०३:२०
मेलिना राईलाई केले व्यस्त बनायो ?
२७ श्रावण २०७२, बुधबार १५:४६
सन्तानद्वारा अपहेलित बुवाको पीडालाई डा.भोला रिजालले गीतमा यसरि उतारे ( भिडियो सहित)
२० कार्तिक २०७४, सोमबार १०:२६